Ranavalona I - Wikipedia
Ranavalona I (1788-1861) dia mpanjakavavy malagasy izay nanjaka tao amin'ny Fanjakan'i Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 1828 hatramin'ny taona 1861, izay mpanidrahindra tanindrazana sady nanohitra ny fitsabahan'ny Eoropeana amin'ny raharaham-panjakany no nanandratra avo dia avo ny fanompoan-tsampy sy nanenjika fatratra ny fivavahana kristiana.
Tamin'ny taona 1828, tamin' ny nahafatesan-dRadama I vadiny sady zanak' Andrianampoinimerina, dia izy no niakatra teo amin'ny fitondranana tamin'ny 4 Aogositra 1829 ka niova anarana hoe Ranavalona na Ranavalomanjaka fa tsy natao hoe Ramavo na Mavo na Rabodonandrianampoinimerina intsony. Tsy nana-janaka tamin-dRadama I izy nefa niteraka an-dRakoto (ilay lasa Radama II) efa ho iray taona mahery taorian'ny nahafatesam-badiny.
Satria noheveriny fa tia vazaha loatra sy tsy niraharaha firy ny fivavahan-drazana ary nanova ny lamim-piarahamonina nifandovan'ny mpanjaka nifandimby Radama I, dia nataony izay tsy hisian'ireo mpiara-miasa tamin-dRadama I ka nasandrany avo indray ny fanompoana ny sampin'ny mpanjaka. Tsy dia ny andriana loatra, araka izany, fa olon-tsotra no nianteherany hanatanjahany ny fahefany. Nihevitra izy fa fanitsakitsahana ny fiandrianany ny fanao sy hevitra nampidirin'ireo misionera nitory ny Filazantsara teo amin'ny fanjakany satria sady nitory ny haratsian'ny fanompoan-tsampy no nampianatra ny fitovian'ny olombelona rehetra ka mifanohitra amin'ny fomba nolovana hatramin'izay, dia ny fisian'ny saranga samihafa, indridra ny fisian'ny fanandevozana. Hoy izy: "Ny fomban-drazako tsy mba mahamenatra ahy na mampatahotra ahy !". Tsy azo nomena fampianarana noho izany ny andevo nanomboka tamin'ny taona 1832 nanomboka nihamafy koa ny fanenjehana ny Kristiana ka nisy ny novovoina ary maro no nandao ny fonenany.
Noroahiny hody ny solontenan'ny fanjakana britanika sady nanohitra ny fidiran'ny tafika frantsay tao amin'ny fanjakany izy tamin'ny taona 1829.
Tsy ny tanin'ny Madagasikara manontolo no nofehezin'ny Fanjakana merina, izay nataon'ny Eoropeana hoe Fanjakan'i Madagasikara, ka noho izany dia niezaka Ranavalona I mba hanjaka koa tamin'ireo mponina tany amin'ny tapany atsimo-atsinanan'i Madagasikara sy ny ao afovoany atsimo ary any avaratra-andrefana izay teo ambany fiarovan'ny Frantsay nanorim-ponenanan tao Nosibe hatramin'ny taona 1841, faha Napoléon III.
Nifandraharaha tamin'ny mpivarotra eoropena ihany Ranavalona I tamin'ny hisian'ny fanamboarana fanaka sy fitaovam-piadiana eto an-toerana hiarovany ny fanjakany, ka ilay Frantsay atao hoe Jean Laborde, izay mpanao taozavatra tsy niankina tamin'ny fanjakana frantsay, no nisahana izany nanomboka tamin'ny taona 1843.
Nila fiarovana tamin'ny Frantsay i Rakotondradama nefa tsy nampahalala mialoha izany an-dRanavalona I izay tezitra noho izany ka nandroaka ny Eoropeana izay noheveriny fa nikononkonona fanonganana sady namono Kristiana maro dia maro tamin'ny taona 1857 izay heveriny ho mpivarotra tanidrazana. Hoy izy, mantsy an'ireo Kristiana malagasy "Miala amiko ka mba ialako, mahafoy ahy ka mba foiko !". Maty tamin'ny 18 Aogositra 1861 izy ka Rakotondradama izay antsoina hoe Radama II no nandimby azy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ranavalona_I&oldid=979651"
Dernière modification le 14 Janoary 2020, à 11:29
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2020 amin'ny 11:29 ity pejy ity.